Sakafo eny an-dalana
Rehefa mandeha fiaran-dalamby, bus na fiara ianao, dia tokony hitondra sakafo mahavelona, ​​indrindra raha mitaky andro maromaro ny dia, ary miaraka aminao ny ankizy. Fa tokony hitandrina tsara ity olana ity ianao ary haka fotsiny ireo vokatra izay tsy manamaivana haingana ary tsy manimba ny faran'ny herinandro.
Karazana sakafo inona eny an-dalana?
Ny sakafo ho an'ny làlana dia tsy maintsy mahafeno fepetra maromaro:
Aza misy menaka manitra . Na dia vokatra tianao indrindra aza, ny fofony dia hanelingelina anao rehefa afaka kelikely. Tsy lazaina amin'ny mpifanolo-bodirindrina, raha mandeha fiara fitateram-bahoaka ianao.
Aza mametraka fako betsaka amin'ny tenanao . Crumbs, be dia be ny fonosana - tsy misy ilana azy eny an-dalana, satria miteraka disadisa izany.
Ny sakafo dia tokony hotehirizina mandritra ny fotoana lava ary tsy handroba raha tsy misy vata fampangatsiahana . Ary koa, tsy tokony hatsipy, hiparitaka ary hameno ny ao anatin'ilay kitapo.
Tsy tokony ho sahirana sy mavesatra izany . Zavatra iray raha mitondra fiara ianao, fa amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana fiara fitaterana, ohatra, dia hosakanan'ny kitapo miaraka amin'ny sakafo toy izany ianao.
Inona no sakafo entina eny an-dalana amin'ny fiara, bus, fiaran-dalamby?
Sakafo sy voankazo. Izy ireo dia mety amin'ny sakafo matsiro, ary amin'ny sakafo. Ny karazana voankazo, ny tsaram-bary na ny paoma dia hanolo tanteraka chips, vatomamy na masomboly. Ampiasao mialoha izy ireo, ary hampivoatra ny sakafonao.
Sandwich, rolls, sandwiches . Izy ireo no sakafo mahazatra indrindra. Azonao atao izy ireo amin'ny tsy fisian-kanina matsiro, fa miaraka amin'ny sakafo mahasalama sy mahasalama kokoa. Ary ho an'ireo izay manohitra kalora, fa tsy mofo, dia azonao atao soso-kevitra ny mametaka ny fako ao anaty lavaka mangotraka. Ny rolls dia tsy dia mahafa-po loatra ary tena mahafa-po.
Tsy tokony handevona ny ovy , fa maniry sy voatahiry ao anaty fo. Noho izany dia "hiaina" mandritra ny roa andro izy ary hijanona ho azo ampiasaina tanteraka.
Ho an'ny sakafo matsiro sy mahasalama, voankazo maina, pastilles, muesli amin'ny endriky baranjely, ny akaniny dia tena mifanaraka tsara. Azon'izy ireo atao ny mamaha ny olan'ny zavatra hanomezana zaza iray eny an-dàlana amin'ny sakafo, hanolo azy ireo amin'ny tsipika mahatsiravina sy ny chips.
Vehivavy ao Pokrovsky ao Moskoa
Goa - isaky ny volana
Inona no hitondrana an'i Bali?
Ireo zoro any Koh Samui
Ny moskea Lala-Tulip
Mandehandeha any Vietnam
Fitsaboana seboadia hoditra
Ny aretin'i Lyme - fitsipika momba ny fitsaboana mahomby
Aleo manasa maitso?
Tattoo tree - lanjany
Mofomamy ao an-trano
Mitsangàna jackets miaraka amin'ny hoditra voajanahary
Tena mahafinaritra ny mahandro kisoa?
Ny soritr'aretin'ny meningita amin'ny ankizy dia ny soritr'aretin'ny ray aman-dreny rehetra
Tanora ho an'ny zazavavy
Ny angano Scandinaviana - ireo andriamanitra sy andriamanibavy mahery indrindra sy manan-danja
Red dress - fifantenana ny modely tsara ho an'ny mamiratra!
Ahoana no hiantsoana ny pretra?